I-Nickel Gooseneck yaseBritish Faucet
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Khupha iipompo zeKhitshi / WOWOW Gooseneck Ikhompiyutha Yekhitshi Ngokutsala Isitshizi
WOWOW Gooseneck Khitshi faucet nge Isikhuphe Isitshizi
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 41 amanqaku umthengi
(41 ncomo ngumthengi)
I-faoset ekhitshini yasekhitshini le-WOWOW enokukhetha imisebenzi emininzi. Izixhobo ezikumgangatho ophezulu zokwenza umsebenzi ofanelekileyo. Isiqinisekiso seminyaka emi-5. Ivenkile yethu yokutya ikhitshi lokukhangela ngoku!
2311701 imiyalelo yokufaka
I-Gooseneck Kitchen Faucet 2311701
Ikhitshi lakho kukuzingca kwakho kwaye ufuna ukudibana okufanelekileyo koyilo kunye nokusebenza. Kule mihla unokukhetha uyilo oluninzi ukuya kwisitayile sakho sekhitshi. Kungade kube ngumceli mngeni ukwenza ukhetho kuzo zonke iinketho ezisezandleni zakho. Ayisiyi kuphela ukuba zonke izixhobo zasekhitshini zize nazo zonke iintlobo zeemilo nobukhulu, kodwa kwakhona kufuneka ungayijongeli phantsi impembelelo yokhetho olwahlukileyo lweekhitshi zasekhitshini. Iifishi zasekhitshini yindawo egxile kuyo nayiphi na ikhitshi. Ngaphandle koko, iifishi ekhitshini zezinye zezona zixhobo zisetyenziswayo ekhitshini lakho. Njengoko usebenzisa ikhitshi lakho lasekhitshini ukulungiselela ukutya kwakho, ukuhlamba izitya kunye nokucoca izandla zakho, usebenzisa le nto yasekhitshini kaninzi ngemini. Kungoko kungcono uchithe ixesha elongezelelekileyo ukukhetha eyona faucet yasekhitshini efanelekileyo.
Iimpompo zekhitshi ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokusebenza ukuze zinike uluhlu olubanzi ukuze zilungele zonke iintlobo zeemfuno. Ngaphandle koko, iipompo zasekhitshini ziza ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu kunye nohlobo. Ezona ntlobo ziphambili zeefompo zasekhitshini ziimpompo zekhitshi ezitsala ezantsi, ezokukhupha iifompo zasekhitshini, kunye neepompo zasekhitshini eziphezulu. Ezi mpompo zekhitshi ephezulu zibizwa ngokuba ziibhokisi zokupompa zekhitshi. Olona ncedo luphambili lwee-gooseneck faucets kukuba babonelela ngendawo yokusebenza kuyo nayiphi na ikhitshi. Iimpompo ezinde zekhitshi zikunika ukufikelela okufanelekileyo kwisitya sakho sasekhitshini. Ngale ndlela, awuyi kuba nangxaki ukubeka izinto ezinkulu, njengembiza enkulu okanye ipani, kwisitya sakho sasekhitshini, naphantsi kwepompo yakho yekhitshi ephezulu.
I-faucet ekhitshi ekhanyayo eyenziwe ngamehlo
Abaqulunqi be-WOWOW bayinikele yonke imizamo yabo yokubonelela ngombhobho wekhitshi we-gooseneck owenziwe ngokufanelekileyo onikezela ngokusebenza ngokukuko. Ngenxa yoyilo lwayo olucekeceke, itephu ye-WOWOW's gooseneck ekhitshini ikunceda ugqibezele ikhitshi lakho. Le faucet yekhitshi ephezulu ye-arc ngokuqinisekileyo iya kunika uphakamiso kuyo nayiphi na uyilo lwekhitshi. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ikwasebenza ngokusebenza okuhle kunye nesitshizi sayo esidibeneyo sokutsala ezantsi.
Le faucet yasekhitshini ye-nickeleck ene-nickeleck, ekwabizwa ngokuba sisikhenkci sekhitshi lwe-swan-entamo, inika ukujonga kwemizi-mveliso nezinto zangoku kunye nezingenaxesha. Isikhenkcisi sekhitshi le-Wowow's gooseneck belingayi kuba ngaphandle kwakweliphi na iphephabhuku lokuyila elineeekhitshi zoyilo ezizodwa. Ngaphandle kwento, le faetet ekhitshini ye-gooseneck yenye yezona zinto ziphambili zekhitshi le-WOWOW kunye nokuzingca kwalo mnikezeli wepheyile ekhitshini.
Izinto ezininzi zomsebenzi we-gooseneck ekhitshini
Ngaphandle koyilo, le faucet yasekhitshini le-gooseneck yeWOWOW sisicoci esisebenzayo esinika iindlela ezimbini zokutshiza. Ayisiyiyo kuphela le faetet yasekhitshini ephezulu enika umsinga oqhelekileyo ukwenzela ukuba kuzaliswe iimbiza kunye neepani umzekelo. Ukongeza, inemowudi yokutshiza ekhululekile yokuhlambulula izitya zakho kunye nesinki yekhitshi ukubonelela ngemodi yokucoca ephezulu. Ungatshintsha ngokulula phakathi kokukhetha ezimbini kunye neqhosha kwi-faucet nozzle. Oko kwenza ukuba kunokwenzeka ukutshintsha okukhethiweyo ngesandla esinye ngelixa u-rins. Ukutshintsha imisebenzi akuyi kubangela nakuphi na ukuchitheka kunye nokusebenza lula kwindlela onokuthi ucofe ngayo iqhosha kuya kumangalisa!
Le faucet yasekhitshini ye-gooseneck iza ne-60-intshi yokukhupha ngaphandle enikezela ngokukhupha ngokulula, ngenxa ye-silicon gel nozzle ye-faucet. Ngale hose, unokufikelela ngokulula kuzo zonke iindawo ezinzima zangokujikeleza ikhitshi lakho. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke into, i-swivel adapter eguquguqukayo yenza ukuba ukwazi ukuhambisa lula ukuhambisa intuthuzelo ephezulu. Indlela elula yokubuyisela umva le faucet yasekhitshini le-gooseneck iya kuhlala ikhokelela kwitheniphu engenakubuya imbuyisele kwimeko yayo yoqobo emva kokuba ugqibile ukucoca. Ngaphandle kwengxaki!
Isikhenkcisi ekhitshini leGooseneck elisemagqabini
Umbhobho wasekhitshini ohamba ngokubonelela unika umgangatho kwaye uyaqaphela ukuba kuwo onke amacandelo ale faucet yekhitshi ephezulu. Le gooseneck ikhitshi yetepisi yesisindo ngaphezulu kwe-70 oz, ke uyaqaphela kwangoko ukuba unayo imveliso yentsimbi eqinileyo. I-WOWOW's cass-cored gooseneck faucet ine-nickel egqibeleleyo, kwaye onke amalungu atywinwe ngokuqinileyo ngezinto ezikumgangatho ophezulu. Oku kukunika i-drip-free kunye ne-faucet yamava evulekile. Ngaphandle komgangatho, le faoset yekhitshi yentsimbi yeWOWOW kulula ukuyifaka ngokunjalo. I-WOWOW's high-arc kitchen faucet ifuna nje i-1, 2 okanye 3-hole-kitchen setup and, imibhobho yamanzi ebandayo kunye ashushu. Ezi zinto zibandakanya i-escutcheon yentsimbi yazo zombini, 1, 2, okanye imingxunya emi-3 yekhitshi-setups, yenza le faucetck faucet ehambelanayo nalo naluphi na uhlobo lokuseta ikhitshi. Ihambelana neentlobo ezahlukeneyo zokuntywila kwaye awunyanzelekanga ukuba ulwe nokubuyisa izikhewu ezimbi okanye imingxunya.WOWOW ikubonelela ngeseti epheleleyo yokufaka izinto.
I-faucet ekhitshini yasekhitshini efanelekileyo
Njengomgangatho wepheyile ye-gooseneck ekhitshi ye-WOWOW ayiphikiswa, umgangatho wexabiso lomgangatho wale faucet ephezulu yeekhitshi yeyona nto uza kuyifumana emarikeni. Kungenxa yokuba i-WOWOW isebenzisa kuphela iindlela zokuvelisa eziyinkqubo ezisebenza ngokuzenzekelayo, sinokunika le faetet yasekhitshini le-gooseneck ngexabiso elixabiso eliphantsi. Isikhenkcisi ekhitshini sihlala siyinto yokugqibela ethengiweyo ikhitshi elisandula ukwenziwa. Ke ngoko izitshitshisi zasekhitshini rhoqo kukungena kokuvala kohlahlo-lwabiwo mali lwekhitshi lonke, apho imida kolu hlahlo lwabiwo mali ihlala isondele Ke kubalulekile ukuba wazi ukuba usenokufumana isuphu ekhitshini esemgangathweni ophezulu kuhlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo.
Ifosili yethu ekhitshini ye-gooseneck ihanjiswa kuwe simahla, ngenxa yoko awuyi kujongana naziphi na iindleko ezongezelelweyo. Yintoni oyibonayo yile uyifumeneyo, kwaye iyasebenza nakwixabiso lethu. Ku-WOWOW sikhathalela abathengi bethu kwaye sifuna ukukunika ithuba lokuba uyilo lwekhitshi elingaphezulu ngexabiso eliphantsi.
Isitshitshisi ekhitshini le-gooseneck esithembele kulo!
WOWOW uyakholelwa kwiimveliso zayo kwaye ke asoyiki ukukunika ixesha lewaranti leminyaka emi-5. Ngaphandle koku sikunika elona nqanaba liphezulu lenkonzo yabathengi. Sisoloko sifumaneka ukukuxhasa, nokuba ufaka itompu yekhitshi yegosos. Akukho nto uqinisekisiweyo nayo ngumgaqo-nkqubo wethu wokubuyisa weentsuku ezingama-90. Ukuba awuyithandi imveliso ngaso nasiphi na isizathu, siya kukubuyisela imali ngaphandle kwemibuzo ebuziweyo. Njengoko ubona, kwi-WOWOW siyazithemba iimveliso zethu!
Izibonelelo zefosetile yasekhitshini ekhitshini ngokungakhathali:
· Inika i-wow-factor kuyo nayiphi na ikhitshi
· Uyilo olwahlukileyo lwesitayile
· Umdibaniso wokudonsa ngaphandle
Imisebenzi emibini yokutshiza
· Dibanisa isitayile kunye nokusebenza okuphezulu
· Yenziwe ngezinto zobhedu eziphezulu
· Kulula ukucoca kwaye kulula ukuyigcina
I-SKU: 2311701 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Khupha iipompo zeKhitshi tags: Uqhekeze uNickel, Yehlisa, spray
I-60 × 30 × 8 cm
Imo ezimbini: Imo yokuChela:
Ekhohlo / Ekunene / iZiko
Ikhitshi / ngaphakathi / uRhwebo / irestyu
Ulawulo lobushushu bamanzi
Ukulunga kwam oku kwenziwe kakuhle kwaye kuyilo oluhle kangaka, lomelele kakhulu kwaye uxinzelelo lwamanzi lungcono kune-Delta yakudala eyithathele indawo, bekukulumkele ukuthenga uphawu, kodwa eli qhekeza lingcono kakhulu kwaye umgangatho ubalasele, mna Ndizokuthenga zonke iipompo zam kubo kwixa elizayo, ndibane iipompo zangasese ezi-2 ngokulandelelana ndiyithandile le Khitshi kakhulu, ngokuqinisekileyo ndiyakucebisa kuye nakubani na ofuna ukutshintsha izinto ezindala, ezixabisa imali.
Nangona bendibuhlungu ukuvalelisa kumpompo wam wokuqala we-MC, ngokuqinisekileyo le yinto entle! Ndiyathanda ukuba bade babonelele ngeiglavu ezikhethekileyo zokufaka ukuze ungangcolisi i-chrome
Kuhlahlo-lwabiwo mali kufanelekile imali! Kwakulula kakhulu ukuyifaka (ukukhupha eyethu endala yayiyenye into). Ndiza kukhankanya i-hose retracts ngokusebenzisa ubunzima obunzima kakhulu, obunamathele kakuhle ekupheleni kwethumbu phantsi kwesinki.
- Uxinzelelo lwamanzi olugqwesileyo
Ukusebenza ngokugudileyo kwesiphatho kunye nethumbu
-Umbhobho ubuya ngokutyibilikayo kwaye ubuyisele ukuqala isikhundla
-Isiseko sigubungele imingxunya yentsusa yeencindi zamanzi ashushu / abandayo
- 3 iisetingi zokutshiza ezahlukeneyo ngombhobho ngeqhosha lokumisa ngokukhawuleza
-Ukwazi ukulingana neBhola yokuQhawula iBhola phantsi kwayo ngokulula okanye ungayishiya kwikhawuntara kwaye usebenzise umbhobho ukuyizalisa.
-Akayifumani enye okwangoku.
Iyaxabisa imali ukuba ujonge itampu enesitayile ngaphandle kokuqhekeza ibhanki. Ncoma kakhulu le!
SIBEKE le faucet kulwakhiwo lwethu emva kokuphuma kwesikolo. LILULA nje eli gama! Kufuneka kuphela izixhobo ezi-2 kunye netawuli. Ndifakele itephu efanayo eyilwe kwaye eli lijongeka kwaye liziva likhulu. Womelele kwaye akukho ukuvuza
Kwafuneka siqhele amaqhosha okuhamba kwamanzi ukuze isiphatho sokutsala sibekwe emva kwesiphatho (sijonge itompu kunokuba sijongane nathi). Ndiyayifumana, sebenzisa iminwe yakho kunokuba isithupha sakho sitshintshe ukusuka kumjelo ukuya kutshiza. Siza kubona ukuba wonke umntu esakhiweni uya kuqinisekisa ukuba isiphatho sibuyiselwa entanyeni kunokuba siyishiye ilenga.
Ndiqaphele into encinci engafanelekanga inkwenkwezi… Iqhosha elincinci elibomvu nelibomvu kwisiphatho lihlehlile. (Jonga umfanekiso wokuqala apha ngezantsi. Faucet ngasekhohlo yile faucet yentsusa. (Faucet ekunene yi-faucet entsha) Ngokwesiqhelo ebomvu ibasekunene kwaye luhlaza okwesobunxele ikwindawo yamanzi ashushu abandayo. Ndizamile ukujika iqhosha kodwa ndaqaphela ukuba aliphumeli. Akukho ngxaki, ndiqinisekisile ukuba imibhobho yamanzi iyahambelana neqhosha kwaye ndiza kwazisa abasebenzi bam.
O *** n2020-05-10
Oku kukubonakala kwam emva kokufaka kunye nokusebenzisa oku kusuku olunye.
Ukukhupha oku ngaphandle kwebhokisi kwakuziva kuqinile, kwaye kujongeka kulungile. Yayipakishwe kakuhle, kwaye kwakungekho zimpawu zomonakalo wokuthumela.
Ndikwazile ukuyifaka ngokulula ngesibini seeplisi, kunye nomqhubi wesikrewu sePhilips. Imiyalelo icacile ngokwaneleyo, kwaye andabinangxaki ngofakelo lokwenyani. Ingxaki ekuphela kwayo enokubakho yayiyinto encinci enemiyalelo. Imiyalelo ibonisa ukuba kuya kufuneka ubeke itompu ngokusebenzisa umngxunya wokuntywila esinkini (Ngokukhetha kubandakanya i-bezel yemingxunya emithathu yemingxunya), emva koko ukusuka ngaphantsi, beka isheringi seplastikhi, isher yesimbi kunye nenut enkulu. Into ayibonisiyo kukuba kukho isangqa O esidinga ukuya kwisitampu sefomathi PHAMBI kokuba ibekwe emngxunyeni onyukayo okanye kwi-bezel. Oku kwakungekho nzima ukukuqonda, kodwa kunokuba nokudideka kancinci.
Lilonke ndikwazile ukususa itephu endala ndaza ndanyusa entsha kwithuba elingaphantsi kweyure.
Ndonwabile yindlela esebenza ngayo le faucet. Isibambo siziva sigudile kwaye siqinile ukusebenza kwaye khange ndibenangxaki yokuhlengahlengisa kubushushu obufunekayo kunye nenqanaba lokuhamba. Amaqhosha okukhetha ukutshiza asebenza kakuhle. Ukucwangciswa kwesitshizi kunamandla kakhulu, okulungele ukucoca. Umbhobho uziva uqinile kwaye umbhobho wokutsala usebenza kakuhle kwaye ubuya ngaphandle kweengxaki. Le faucet ikwajongeka ilungile kwaye iyahambelana nesinki engenasinxibo esicocekileyo ndiyikhwelise ngokufanelekileyo.
Ezinye izikhalazo ezincinci:
Ukuhlengahlengisa iqondo lobushushu ngelixa amanzi evulekile kuva nje kancinci. Akunzima, kodwa ayifanelekanga.
Kwiseti yokutshiza, xa amanzi ejikwe yonke indlela isenokuba namandla kakhulu, kwaye inkungu / ukutshiza okukhanyayo kuya kusinda esinkini.
Iqhosha lokukhetha imowudi yokutshiza linokuchukumisa ukukhanya. Ndingathanda ukhethe ukuthatha uxinzelelo oluncinci lokutshintsha imo.
Ndicinga ukuba le yimpompo elungileyo, kwaye ibonakala ithelekiswa nezinye ezixabisa kane. Kulifanele ixabiso kwaye kufanelekile ukulinganiswa kweenkwenkwezi ezintlanu.
Wow imveliso entle ngexabiso. Thelekisa iipompo ezifanayo kwaLowe kunye nezabo zaziphindwe kabini kwaye zaphindeka kathathu ixabiso. Kulula ukuyifaka kuza nayo yonke into efunekayo. Ungayincoma kakhulu le brand.
Enkosi mfazi wonwabe kakhulu!
NDIYAYITHANDA le tephu. Siye saya kwi-enamel edityanisiweyo isinki yentsimbi yentsimbi ene-nickel faucet eyayiyinyani kwindlu yethu yee-1950 sayifaka endaweni yale. Ndifuna nje into enye ephathwayo nayo eyayitshiza. Kubukeka buhle kwinto yethu eqhubekayo yokulungisa iikhitshi kwaye isebenza kakuhle! Asinawo uxinzelelo lwamanzi, kodwa oku kusenamandla amakhulu, ngakumbi xa unayo kwisitshizi endaweni yomjelo. Umyeni wam wayifaka ngaphandle kwengxaki kwaye khange ayenze ngaphambili.
Umbhobho omdala wasekhitshini wawuvuza amanzi, okokuqala wazama ukubeka i-epoxy ejikeleze indawo evuzayo, akakwazanga ukulungisa ingxaki, wagqiba kwelokuba athenge itompu entsha yokutshintsha itepu evuzayo.
Indlu yipropathi yokurenta, ayinakuthethelela ukuchitha i-200 yeedola ukufumana i-delta / moen, kukhangelwe kwi-wowow, ekugqibeleni ndigqibe kwelokuba ndifumane esi sisiseko kuvavanyo nakwixabiso.
Undithathe malunga neyure ukususa itepu endala kwaye ufake entsha. Umbhobho ngokwawo ubonakala wenziwe kakuhle, imiyalelo icacile. Emva kokuyifaka, khanyisa / cima itepu, usebenze njengoko kulindelwe, akukho kuvuza. Ngethemba, le faucet ihlala inje ixesha elide. Ndonwabe kakhulu ngokuthengwa.
Xa ndathenga ikhaya elineminyaka engama-80 ubudala, ndandisazi ukuba ndiza kudinga ukubuyisela izinto ezimbalwa, ngakumbi itepu endala yasekhitshini.
Umbhobho wokuqala wawufakwe ngendlela engeyiyo, ngoko ke amaqhosha amanzi abandayo / ashushu abhalwa ngokungachanekanga. Kwakhona yayinoxinzelelo lwamanzi olubi kwaye isitshizi asisasebenzi. Kwiiveki ezimbalwa emva kokungena, ndaye ndagqiba kwelokuba ukubuyisela itompu yayiza kuba yiprojekthi yam elandelayo.
Ndithenge le faucet intsha emva kokujonga abanye kwiivenkile zokuphucula ekhaya kunye nokufunda ukuphononongwa. Ngokuqinisekileyo le ayizange idanise.
Nje ukuba kususwe itepu endala, ukufaka le nto yayingumoya kwaye kwathatha ixesha elingaphantsi kwesiqingatha seyure. Emva koko ndabuya ndabuya namanzi ukuwavavanya kwaye ndiye ndazicaphukisa ngokungathengi oku kwangoko. Kwakungekho kuphela uxinzelelo lwam lwamanzi ukubuyela esiqhelweni, iilebhile ezishushu nezibandayo zagqitywa zalebhelishwa ngokuchanekileyo kwaye ukusebenza kwesitshizi kwabuyiselwa ngokupheleleyo.
Ngokubanzi, ndonwabe kakhulu ngokuthenga kwam - le yenye yezinto endizithandayo "ukuphuculwa" endikwenzileyo ekhayeni lam okwangoku!
Kuthathwe indawo yokubamba enye yakudala, umngxunya omnye kunye nale. Yonke into ilunge ngokugqibeleleyo kwaye yayimangalisiwe kukuba iza neerhasi ezishushu nezibandayo ezibotshelelwe ngqo kumdibaniso wam wevalve yonikezelo. Umbhobho wokutshiza uyakhawulezisa-uqhagamshele kwaye uqhume kakuhle kunye. Ndinendawo ezivuzayo zokuqala zama. Izixhobo ezifunekayo: ukujija umqhubi kunye nesitshixo esincinci ukuqinisa i-nut kwimingxunya efana neepleyiti okanye utsalo. Ukufakwa okulula kakhulu. Ukuba bendingumtywini weplamba bendiya kuthenga ishumi elinambalwa loku kwaye ndizigcine kwilori yam. Umthengi angabhatala i-150 yeedola kuyo kwaye onwabe.
Okokuqala ndandimangalisiwe yindlela epakishwe kakuhle ngayo itepu kwaye yayibukeka buhle. Kwakungathi sisixhobo esihle xa uvula ibhokisi kwaye uyibona okokuqala. Sifakele le yethu kwibhabhu yethu yohlobo lwesi-2 yokuphatha iimpompo ezazinzima ngakumbi ngaphantsi ngenxa yendawo emxinwa yokufumana isezantsi - kwakufuneka ibalekele kwivenkile yehardware ukufumana into eyahlukileyo engakhange ibethe macala. ibhafu. Ndingacebisa ukuba inkampani ibandakanye ukujikeleza kugcino okanye yenze ukuba kufumaneke okufanayo nezo zisetyenziswe kwimibhobho emibini yohlobo lwemingxunya. Sifuna ukuba isitshizi sihlambe inja kwaye zonke ezinye iipompo ezinesitshizi ezinokulingana olu hlobo zenziwe ngexabiso eliphantsi sacinga ukuba sizakuzama oku. Oku kufakwe izolo komnye wemingxunya (olingana ngokuchanekileyo kunye neentambo ezihamba ngayo kwaye siya kufumana iplagi yomngxunya oshiyekileyo okanye sibeke isixhobo sesepha). Ixesha liza kuxela njengoko lisetyenziswa ukuba ligcina njani kodwa sonwabile ngemveliso!
Ndiyayithanda yonke into malunga nale faucet. Ayibizi kakhulu kodwa ixabisa imali ngokuqinisekileyo! Umbhobho ngokwawo uthatha ukungena nokuphuma kakuhle kwaye ubude kakhulu ngokunjalo. Ke kulungile ukuba uhlambe naziphi na izitya kwaye uhlambe uyatshona emva koko ngokunjalo!
Ndidinga ukutshintsha itephu yam endala yasekhitshini, bendinomdla kuyilo lwale faucet, i-WOWOW ayidumanga ngokwaneleyo, kodwa ixabiso lilungile, ndiye ndathenga ngaphandle kwamathandabuzo. Umyeni wam ulandele imiyalelo yokufaka, kwaye angade agqibe ngaphandle koncedo lomnye umntu! Isebenza kakuhle, ukuhamba, ukuphatha, ukukhupha isitshizi, konke kulungile! Isivumelwano sonelisa kakhulu!
Iintlobo ezifanayo zeefompo zithengisa amaxesha ama-3 amaxabiso kwiivenkile zokuphucula ekhaya. Ndidiniwe ngenxa yoku, kodwa ndonwabile ngoku kuthenga. Uxinzelelo lwamanzi lufezekile kwaye isitshizi sokutsala sisebenza kakuhle kwaye sibuyele ngokugqibeleleyo. Andikholelwa kumgangatho wexabiso !!!
QAPHELA: Emva kokusebenzisa oku iinyanga ezininzi kuya kufuneka ndonwabile kakhulu ngale mveliso. Iziva yomelele kwaye ikumgangatho kwaye isebenza ngokungagungqiyo. Ndinezinto ezithile ezixhalabisayo kuba bekukho uphononongo oluncinci apho abanye bechasa malunga nendlela intloko yokutshiza eyenzileyo (okanye engakhange) ibuyise kwaye ibambe endaweni yayo kodwa andibinangxaki ubunzima benza umsebenzi olungileyo wokuwenza urhoxe kwaye uyahambelana kufuneke i. Le intle itepu njengayo nayiphi na into endiyibonileyo ebiza kabini nangaphezulu.
Ijongeka yoyikeka, isebenza ngokugqibeleleyo kwaye yayiyimizuzu emihlanu ukuyifaka. Isitayile esihle kakhulu, ukujonga okuhle, izinto ezisemgangathweni.
Olunye uphononongo luphawula ukuba uphawu olushushu nolubandayo kwimpompo lubeka ishushu kwicala lasekunene lolawulo lokujikeleza, apho uninzi lweepompo zaseMelika lubeka ishushu ngasekhohlo. Ayibalulekanga kwaphela, ukumakisha kucacile ngokwaneleyo kwaye kuthathwe yonke imizuzu elishumi elinesihlanu ukukuqhela. Nangona kunjalo ukuba ubeke i-lever kwicala lasekunene njengoko uninzi lusenza kushushu ngasemva kwaye kuyabanda ngaphambili lukhetho olufanelekileyo. Kodwa ukuba kubaluleke kakhulu ungaguqula ukubanjwa kwemigca (nangona isikhombisi esincinci sombala singalunganga. Ndikhetha ukuba isalathi sichaneke kwimeko apho undwendwe lungaqapheli ukuba lusebenza njani…)
Eyona nto ndiyichasayo lixabiso elihlala lihla kwaye ndihlawule ngaphezulu kodwa, imali ebandakanyekayo sele incinci kolu hlobo lwetheyiphu… ibiyinto enkulu kwixabiso endihlawule ngalo kwaye inokuba sisivumelwano esingcono kuwe .
Le faucet iguqule isinki, ijongeka intle, kulula kakhulu ukuyicoca, ineminwe simahla, isebenza kakuhle, icetyiswa ngokupheleleyo!
Ndinayo le nto iinyanga ezimbalwa ngoku kwaye kufuneka nditsho, idlulile kulindelo lwam kwixabiso elihlawuliweyo. Ijongeka intle kwaye isebenza kakuhle. Ndonwabile ngokuthenga kwam!
Kulula kakhulu ukuyifaka. Isinki sokuntywila asifuneki, isikrufu esihlengahlengisayo esiphakathi isixhobo se-Phillips se-screwdriver (ngokude kube lula) sikwabumba iteyiphu yokunxibelelana ngombhobho. Uthathe yonke imizuzu engama-20 ukuyifaka xa iphumile endala. Le yayiyinto elungileyo yokuthenga kwaye ijongeka intle!
Kuthengwe le faucet ngento encinci kunombhobho ofanayo kuya kuba kwivenkile enkulu yebhokisi. Umpompo omdala wawusiya uba krwada kwaye kwakunzima ukugcwalisa iimbiza zamanzi. Ukufakwa kwakulula kwaye akuzange kuthathe ixesha elininzi. Ndingacebisa le faucet kuye nakubani na ocinga ukuyithenga.
Lo ngumsebenzi wobugcisa kumthengi okhethiweyo. Awuyi kudana kule ntengo. Ndifunde ezi ngxelo kuqala. Ividiyo enenenekazi eliyitsalayo ngaphandle kokufakwa kwayo iyahlekisa njengaleyo ndiyifumeneyo. Umntu ophambi kwam ebeyifakile phantsi kwetafile yekhawuntara kwimigca yokubonelela kuqala hayi ngelixa uphantsi kwesinki kwaye ndiyifumene ngoluhlobo. Kwafuneka ndiyisuse. Abanye abantu abanangqondo ngamanye amaxesha. Yafakwa kwimizuzu eli-15. Ibuyela umva njengoko kufanelekile ngobunzima obuqhotyoshelwe ngqo kwithegi ebomvu ethi "ubunzima" kwaye awuyiqinisi yonke indlela okanye uya kuyikhink. Le yeyabantu abathanda izinto ezintle ekhitshini labo, ngakumbi ngaphandle kwentsimbi kwaye bayayisula emva kokuphela kosetyenziso ngalunye. Bathanda ukugcina isipili esiphelelweni kuyo yonke into. Le yeyakho. Yonwabele.
Le tephu entle ukuza kuthi ga ngoku. Ithumbu liyaguquguquka kwaye libonakala lakhiwe kakuhle. Itepu yayilula ukuyifaka kwaye ijongeka intle kuyilo lwentamo yerhanisi. Sikuthengile oku ukuze sithathe indawo endala eyaphukileyo kwaye asiphoxeki kwaphela. Ndiyathemba ukuba ihlala iminyaka emininzi. Ndiyavuya kuba kuza kujongwa isilivere esinebrashi ehambelana nazo zonke izixhobo zethu.
Le tephu intle! Umyeni wam ebengenangxaki nokuyifaka. Yeyiphi imveliso entle yemali. Ijongeka ngathi ibiza kakhulu kunakuqala. Ndicebisa kakhulu!
Yithande le faucet. Inqaku kuphela endinqwenela ukuba libe nalo kukucima isitshizi xa itepu icima. Kuya kufuneka uyitshintshe ngesandla ukubuyela kumjelo oqhelekileyo kungenjalo iya kuhlala kwisitshizi
Kulula kakhulu ukufaka kunye nomgangatho ophezulu kakhulu. Kuthathe kanye imizuzu eli-12 ukuthatha ityhubhu yangaphambili kwaye uyityibilikise kuyo. Le faucet yintsimbi enzima. Ndaya kwivenkile enkulu yebhokisi yezixhobo ndaza ndathelekisa. Le ithelekisa kakuhle nezo zixabisa kathathu okanye kane. Ndikude nengcali kwaye kodwa oku ndikubeka ngaphandle kwengxaki. Umnqweno omhle.
Ndayalela oku ngenkxalabo encinci kuba iindleko zazincinci kakhulu kunezinye iimveliso ezinokuthelekiswa, kodwa ngokusekwe kuvavanyo endicinga ukuba kufanelekile ngomngcipheko. Ndinayo ngoku ngaphezulu kweenyanga ezimbini kwaye ndiyayithanda kakhulu! Yomelele, amaqhosha kulula ukuwasebenzisa kwaye ndiyayithanda into ethi "nqumama" ukugcwalisa imiphanda, njl.Okukuphela kwento engathandekiyo endiyifumeneyo kukuba umbhobho awunakuba bhetyebhetye njengombhobho wokugqibela endinawo; ayitsho ukuba iqine, kodwa ngekhe uyigobele ku "u" okanye nantoni na. Ndingacebisa le nto ngokusekwe kumava am ukuza kuthi ga ngoku!
Ndizifakele oku kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ukuza kuthi ga ngoku, asikabinakho ukuvuza, iindawo ezinomhlwa okanye naluphi na olunye uhlobo lomonakalo. Luhlobo olunobunzima kwaye lubonakala ngathi lincinci xa uqhuba isibambo, kodwa khange sibe nangxaki ngaso. Yimpompo ngexabiso eliphantsi, ke ngoko ndicinga ukuba oko kuthetha ubulunga obuphantsi kuneempawu ezingamakhulu eedola, kodwa olu lukhetho oluhle, olusemgangathweni olusemgangathweni kuthi. Kuye kwafuneka sithenge i-baseplate ukuze sihambe nayo, ekubonakala ngathi kufanele ukuba ibandakanywe, kodwa yayingeyonto inkulu kuthi leyo. Ukuthenga okukhulu.
Kudala ndiyisebenzisa le veki. Faka endaweni ye-Moen faucet eyi- $ 200.00 ebineminyaka emi-2 kuphela ubudala kwaye ibineengxaki ezininzi nge. Le kwakulula kakhulu ukuyifaka. Ngaba ilungile nje ngeMoen. Ekuphela kwento endingayithandiyo kodwa endinokuyiqhela yintloko yombhobho inenotshi kuyo ukuze xa iphinda ibuyela kwinxalenye ephambili yompompo, kufuneka ibe sisikwere ngamanye amaxesha emva koko iyaphuma kancinci. Kulula ngokwaneleyo ukulungisa ngokujija kancinci. Ndiyasibona isizathu sokuba bayenze le nto, ukuze xa isendaweni ukutshintsha phakathi kweentlobo zamanzi kumjelo ongasemva apho kungabonakali khona. Thenga kakhulu!
Ndandijonge ukubuyisela itompu yethu yasekhitshini njengoko indala yayingaphezulu kweminyaka engama-20 ubudala. Ndiqale ndaya kuthelekisa ezivenkileni kwiibhokisi ezinkulu ezimbini zokuphucula amakhaya apho ndifumene khona “uhlahlo-lwabiwo mali” lweepompo zabo zikwi- $ 90 eneempawu endizifunayo. Ndigqibe kwelokuba ndibone ukuba zeziphi izibonelelo endiza kuzifumana kwi-Intanethi.
Le tephu iyamangalisa, kwaye ilula kakhulu ukuyifaka. Ngokwenene kundithathe ixesha elininzi ndisusa itompu endala kunokufaka entsha. Imigca yokuhambisa amanzi inde ngokwaneleyo, imiba enguziro ngaphambili. Ngokubhekisele kwizixhobo zofakelo, ekuphela kwento endandiyifuna yayisisi screwdriver sePhillips kunye nesitshixo esivulekileyo se-5/8. Ngokubhekisele kwizixhobo ezifunekayo zokususa itompu endala, kuye kwafuneka ndimbe ivili lam lokusika ngenxa yekhola engaphantsi kwesinki ibonakalisiwe.
Ukulingana kunye nokugqitywa kwale faucet kuyafana nje noko ndingakufumana kwiivenkile zalapha. Izinto ezibonakalayo zibonakala zikumgangatho ophezulu, kwaye ukusebenza kuhle. Kwabo banokuba nemicimbi ngentloko engabuyeli ekhaya emva kokuyikhupha, kukho ukulungiswa okulula. Hambisa ubunzima bokubuyisela phezulu ithumbu kwiisentimitha ezimbalwa ukuze ingaphazamisi nayiphi na eminye imibhobho. Ubunzima bunzima ngokwaneleyo ukugcina intloko yesitshizi endaweni ngaphandle kwemagnethi, kwaye iyenza kakuhle. Andiyi kuthandabuza ukuthenga enye itepu yeWOWOW okanye ukucebisa kubahlobo okanye kwiikontraki.
Ndiyithengile le faucet kuba umfazi wam okanye intombi yam iqhekeze le ibitshiphu ebisendlwini yam xa ndiyithenga, akukho namnye kubo oya kuyivuma. Isinki yomelele, yonke isinyithi, kwaye kulula ukuyifaka. Ndiqinisekile ukuba nabani na uza kuyaphula nanini na. Kwafuneka ndithenge iithumbu kunye neeadaptha ukufikelela kunye nokudibanisa kumgca wamanzi kodwa isebenza kakuhle!
Makhe ndiqale ngokuthi le yeyona faucet yekhitshi elula ukuyifaka. Bendisenza ufakelo lwemibhobho yamanzi iminyaka emininzi kwaye ndiyiplamba. Impompo iza nayo yonke into efunekayo kufakelo oluqhelekileyo kwaye iza namathumbu amanzi amade ongezelelweyo. Ezi zingene ziluncedo kum kuba ivalve yokuhambisa amanzi ashushu ifakelwe isezantsi kakhulu kwaye andiqinisekanga ukuba izakufikelela? kodwa emva kokukhusela itephu esinkini ndakwazi ukudibanisa umbhobho wamanzi ashushu malunga ne-intshi ukuyisindisa. Ikhithi iza nezixhobo zokuhambisa iivevhe ezimbini zokuhamba ukusuka ku-1/2 ukuya ku-3/8 ″ uqhagamshelo nje xa iivevithi zonikezelo ezikhoyo zingasetwanga ukunxibelelana nethumbu elitsha le-3/8. Imiyalelo yofakelo yayilula kakhulu ukulandela inyathelo ngenyathelo. Elinye lamanyathelo yayikukukhupha umbhobho wentloko kwintloko yombhobho wokutshiza ngaphambi kokudibanisa ukudibanisa okukhawulezayo. Ndilibalekile eli nyathelo kuba ndandisele ndikhuphe amanzi ashushu nabandayo kwibhakethi lokususa nayiphi na inkunkuma ngaphambi kokuqala ufakelo lwompompo omtsha. Le faucet isebenza ngokumangalisayo kwaye lixabiso elikhulu kakhulu kumbhobho osemgangathweni. Ndihlawule i-200 yeedola kwidepho yasekhaya eyayifana nale kodwa kunzima kakhulu ukuyifaka, ubugcisa obusezantsi kwaye ndeza neepali ezimfutshane zokubonelela. Ndingathanda ukudibanisa imibhobho emibini ukufikelela kwivalve yokuhambisa amanzi ashushu kakhulu kwaye ke yintoni eza nepompo yasekhaya. Ndonwabe kakhulu ngokuthenga kwam kwaye ndiceba uku-odola enye itepu kungekudala kwenye into endiyiqeshisayo.
Faucet ikhangeleka intle kwaye isebenza kakuhle. Imiyalelo yayilungile kwaye ufakelo lwalulula.
Ezinye izinto ndizifumene:
* Ukukhupha ispout yiplastikhi ngelixa intsalela yentsimbi isisinyithi. Oku kubonakala kukuhle kumgangatho weefompe kwaye mhlawumbi kunikwe kweli nqanaba lamaxabiso. Ukukhupha umbhobho akusisinyithi. Ndiyathemba ukuba la malungu ame uvavanyo lwexesha kunye nokusetyenziswa.
* Kukho iswitshi yerwala elawula ukutshiza ngokuchaseneyo nomjelo. Kubonakala ngathi ihleli kwindawo yokugqibela oyishiya kuyo. (Uninzi lweefompo endizibonileyo zifuna ukuba amanzi abekhona ukugcina umsebenzi wokutshiza). Iqhosha "lokuphumla" yinto entle yokusebenza kwesandla esinye ngelixa uphethe izitya okanye iipani ngesinye isandla. Ukutshiza kunamandla.
* Kukho ubunzima bokugcina umbhobho wokukhupha endaweni. Oku akunakusebenziseka kum kuba ndinemigca emininzi kunye nemibhobho kunye neevalvu ezivaliweyo endleleni. Andikwazi ukutsala ispout ngaphezulu kweesentimitha ezili-10 ngaphandle kwesisindo sokudibana nxamnye nento. Ukuba indawo yakho engaphantsi kokuntywila ixinekile, le yinto ekufuneka uyiqwalasele. Ngethamsanqa ipompo yam ephumayo ibinentwasahlobo endikwaziyo ukuyisebenzisa apha.
* Kukho isikrufu esincinci sombala wesilivere oxinanisa i-gooseneck (yenza ukuba kube nzima okanye kube lula ukujikajika). Ndiyayichaza le nto ngoba ukuba ufaka isiphatho esijonge ngasekhohlo, isikrufu siphambili kwaye siphakathi. Ukuba ufaka isiphatho esijonge kwiziko, isikrufu sisekunene. Ukuba ufaka isiphatho ngasekunene, isikrufu siba semva. Uyilo lubonakala luthatha ukuba uyakufaka ngesiphatho ngasekunene ukusukela ukuba igama lophawu lijongane nawe kule meko. Uyilo lwam lwantlandlolo yayikukubeka isiphatho ngasekhohlo kodwa andikwazi ukujongana nokubona isikrufu, ndiye ndatshintshela ekubeni nesiphatho embindini. Ndicinga ukuba ukuba nesikrufu esichasene nesiphatho bekuya kuba ngumbono ongcono ukuze zonke izinto ezakhiweyo zikwazi ukubonelelwa ngaphandle kwesikrufu ngaphambili (okanye wenze isikrufu simnyama). Abanye abantu banokungakhathali kodwa kuyabambelela kum.
* Iphakheji ibandakanya ipleyiti yemingxunya emi-3 kodwa kusetyenziswe umngxunya omnye kuphela. Kukho iiadaptha zesinxibelelanisi esingu-1/3 ukuya ku-8/1
Ngokubanzi, ayisiyonto intle kakhulu okanye umphezulu womnatha ompompo ngaphandle phaya, kodwa ndicinga ukuba ufumana ixabiso elifanelekileyo ngexabiso.
Emva kokuba intloko yesinki ebiza kakhulu isilele kwiiveki ezimbalwa kwizitywina zayo ndiyithengile le ngokungxamisekileyo, bendingalindelanga lukhulu. Ndothuswa kukuba ulwakhiwo luqinile, izinto zilungile, kwaye zeza nayo YONKE into endiyifunayo ukuyifaka; Kwaye kwafika neeadaptha zombhobho zilungele ukuhamba. Isinki eqinileyo kwinto endiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku, iya kuhlaziya ukuba kukho into engahambanga kakuhle.
Izinto oza kuzikhumbula xa uthenga:
-Ayikho into yokuhambisa isepha, ke ukuba ufuna ukuyibhangqa kufuneka ufumane isibini
-Ndikuthengile oku kuthengiswa ngexabiso eliphantsi, ke ukunyuka kwesi sinki kusekwe ngokupheleleyo kwixabiso lomgangatho
Uluhlu oluhle lokushukuma kwentloko kunye nokuphatha, ke qiniseka ukuba ayisondeli kudonga lwangasemva (Atleast 1 1/2 intshi)
Kudala ndifuna ipompo enje kodwa ndingenayo imali eyoneleyo yokuyithenga. I "WOWOW Faucet" yakho yenziwe kakuhle kumgangatho kunye nemali. Nceda ugcine isitokhwe kubantu abanjengam abathi kuhlahlo-lwabiwo mali kwaye ngoku ndinompompo omnandi kakhulu wokusebenzisa ixesha elide. Enkosi kwaye nceda ugcine wonke umsebenzi olungileyo. Enkosi!
Ndiyinto entsha entsha endaweni ye-DIY ekhitshini. Kwafuneka ndibuyisele umpompo omdala wePfister 526 Contempra othe wathoba umbhobho wakhe waqalisa ukuvuza kanye emva kwentloko. Andikwazi ukwenza isigqibo sokuba ndiza kuyilungisa okanye ndiyibuyisele. Ndilungise ingxaki eyahlukileyo kuyo kanye ngaphambili. Kodwa yintoni eyilwe kakubi, yenziwa ngobunjineli, kwaye ke yimveliso ebizayo. Ukulungiswa akuzange kubonakale kuyindlela elungileyo. Nkqu namalungu ayebiza. Faka enye, enye iya kunikezela kuwe (yileyonjineli engaphezulu kunye noyilo olubi). Ndiyabulela kuThixo ukuba ndiyilahlile. Ndiyabulela ukukholisa kunye nokukhuthazwa ngabahlobo kunye nosapho, kunye nesivumelwano sombane ngexesha elifanelekileyo esikhanyise kwi-WOWOW, ndinike i-WOWOW ifoto. Ungaze uhambe gwenxa ngepompo entsha ebiza iindleko ezifanayo nePfister yokutsala umntu yedwa. Ukulula kwayo, kuyilo olusengqiqweni, kwaye zonke izixhobo ezifakiwe kwiphakheji ziyenze yanwaba ngakumbi ukuyifaka. Indinike ukuzithemba okutsha emva kokuwenza lo msebenzi. Kufanelekile. Makhe ndibuze, yeyiphi enye into ayifunayo umntu etepini yasekhitshini konke konke, xa bonke bephantse banezikhalazo ezifanayo.
Ndithengile le faucet yekhitshi emva kophando oluninzi ndijonge kwiimodeli ezahlukeneyo. Ndiyayithanda ukuba ineqhosha elibonisa ngokucacileyo kushushu kwaye kuyabanda. Ezinye iimpompo endizikhangeleyo azinalo olu phawu. Ndine plumber ndiyifaka kwaye wathi eyona nto inzima kukususa itephu endala. Ukufaka le nto kwakulula ngokulula kuye.
Umbhobho unokuhamba kakuhle ngokuhamba kwamanzi ngokuthe ngqo nangokubanzi. Isibambo sihamba kakuhle ukusebenzisa. Ndiyathanda ukuba umphezulu wetephu ungasuswa kwaye ufikelele kwezo ndawo zinzima esinkini. Besinombhobho wesikolo esidala ke le yinto entle kuthi ngoku. Lilonke, ukuthengwa okuhle kakhulu kwe-IMHO. Siyithengile kwi-nickel ebrashiweyo kwaye kulula kakhulu ukuyigcina icocekile ngokuchasene ne-chrome endaweni yayo.
Ngokwezinto esizithandayo siyasithanda isitayile, iarc ephezulu, kunye nokujija ngokulula ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye. Ukuhamba kakuhle kwe-aerated kunye nesitshizi esihle. Ngokuthanda izinto ezingathandwayo, isikhalazo sam ekuphela kwaso iya kuba yimisonto esemgangathweni engekho mgangathweni kwi-nut edibanisa itompu yesinki. I-nut iya kujika i-3/4 revolution ngokulula kwaye i-1/4 yokugqibela ibe nzima kakhulu. Kwakunjalo yonke indlela ukuya esinkini eyi-1/2 ″ ubukhulu kuphela. Ayimnandanga indoda endala elele ngomqolo phantsi kwesinki. Isitya se-escutcheon sigqume nje imingxunya emithathu esinkini. I-intshi inde ngekwakudityanisiwe. Isitywina esiphakathi kwetheyipu kunye neplate ye-escutcheon (into 2) ibizwa ngokuba yi "gasket". Ngokwenene isangqa O. Ibhasikithi ithe tyaba. Uninzi lwabantu luyakwazi O umsesane xa beyibona. Iyenza ingabhidanisi kangako njengoko kukho i-gasket yerabha (iflethi) ehamba phantsi kwesinki ngaphezulu kwesitya sensimbi. Ukudityaniswa konikezelo lwamanzi kuyakhawuleza kwaye kulula. Akukho namnye ukuvuza.
Yifumane! awuyi kuzisola !!!!! Kulula ukuyifaka kwaye kuthethwa ntoni kwinkcazo, imizuzu engama-20 ukuyibeka ngokudibeneyo, YUP !!!! ngokoqobo kwandithatha imizuzu engama-20. Itephu inde, ke ndiyakucebisa ukuba umthengi alinganise indawo yabo b4 ayithenge. Ndiyathanda ukuba itepu ifikeleleke kwaye ijongeka ibiza. Enkosi WOWOW ngokubeka itompu ngexabiso elifanelekileyo !!!!! Okwangoku, andinakuthetha nantoni na engaginyisi mathe ndicebisa le faucet ngoko ke yiya kuyo!
Ndingu-skeptic opheleleyo ke ndathenga kakhulu kwaye ndazama konke okusemandleni ukuba ndingatshiswa. Ndithathe isigqibo kule faucet, nangona ezinye iinxalenye zam zisithi "hlawula ngaphezulu ukuze ufumane umgangatho WENENE". Ukuhlala kubalulekile kum-ukuya kwinqanaba. Ukuza kuthi ga ngoku ndiziva ngathi le mveliso ihanjiswe ngokupheleleyo, kwaye idlulile kulindelo lwam. Umoya ukufakela (nangona ingeyiyo eyona nto iphambili), kodwa eyona nto isebenza ngokugqibeleleyo: amandla apheleleyo xa ufuna, kancinane ukuba awuthandi ukutshiza kodwa kulula ukutshintsha phakathi kokutshiza kunye nokusasaza. Umyeni wam wayengaqinisekanga ukuba uyayithanda inkangeleko, kodwa ngoku ingaphakathi uyayithanda. Lilonke kukuphumelela ngokupheleleyo (ukuza kuthi ga ngoku). Ndiza kuhlaziya ukuba kukho nantoni na etshintsha ngokusetyenziswa (ukuzinza), kodwa iiveki ezimbini kwaye ndiyayithanda.
Ukusukela ngoku uvula iphakheji, le faucet ibonakala ikumgangatho ophezulu. Kulula ukuyifaka kunye nemisebenzi kakuhle. Ndayisusa itompu endala yokuhambisa amanzi eyayinombhobho wokuvuza ovuzayo nangona wawungekho mdala kakhulu. Umgangatho wowow uphezulu kakhulu. Ukwenza le faucet isebenze kwindawo yokuhlambela enemingxunya emi-3, bendidinga i-escutcheon eyi-6 (endaweni yale inkulu ebandakanya ukufakelwa ekhitshini). Ndifumene i-BWE 6 ″ escutcheon ekwi-nickel efanelekileyo kakuhle (ezinye ezininzi endizithengileyo azizange zityibilike kwi-WOWOW nangona ezinye ii-escutcheons zathi ububanzi bazo yi-1/3 ″). Ndisebenzise i-rasp kwi-drill ukwenza umngxunya wendawo ube mkhulu ngokwaneleyo ukulungiselela i-WOWOW. Ndonwabe zizinto zombini.
Sikwinkqubo yokulungisa ikhitshi lethu kwaye sasifuna itompu entsha kuba endala yethu yayivuza. Emva kokuphonononga inani leemodeli ezahlukeneyo sigqibe kweloku.
Ixabiso laligqibelele (sirenta ngoko ke sasingafuni ukuchitha imali eninzi) isinki yethu yakhutshwa njengoko sasiphinda sibeka iincopho zethu zokubala ngoko ke kwakunzima ukuyifaka ngoluhlobo kodwa ndayifaka ngelixa umyeni wam esebenza .
Asinakho ukuvuza, ukutsala isitshizi yinto yam entsha endiyithandayo lol. Ijongeka ngathi ibiza kakhulu kwiivenkile ezinkulu zebhokisi, inike ikhitshi lethu imbonakalo yanamhlanje nenhle kangangokuba ndiyakonwabela ukuchitha ixesha ekhitshini lol. Ngokuqinisekileyo uya kuncoma !!
Olu luphakamo lwesine oluphezulu, tsala itompu yasekhitshini endiyifakileyo.
Le yeyona ilungileyo.
Inonxibelelwano olude. Kwaye isinyithi sikhawulezisa ukudibanisa nut.
Ukukhupha umbhobho mde, kunye nensimbi engenasici. Kwaye ineqhosha lokuphumla abanye babengenalo. Ikwanenqanaba lokuhamba okuphezulu kakhulu.
WOWOW Ikhitshi lesitshisi sokuthengisa isitshizi